Shina: Mpianatra ao Beijing manohitra ny hanao famerenana mitabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2009 7:29 GMT
Satria moa efa mihamanakaiky ny 1 Oktobra hankalazana ny faha-60 taonan'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina, dia netsehina hanao mitabe ho amin'izany fotoan-dehibe izany ny mpianatra avy amin'ny lisea sy ny Anjerimanontolo mihoatra ny iray hetsy ao Beijing. Misy ny mpianatra tsy faly loatra satria tsy maintsy manao mitabe avokoa ny mpianatra rehetra.
Notaterin'ny gazety Apple Daily, avy ao Hong Kong, tamin'ny 18 Septambra 2009 fa misy ny mpianatra sasantsasany no leo noho ny tsy maintsy hanaovana famerenana hatrany ity mitabe ity efa hatramin'ny vakansin'ny fahavaratra [ilabolantany avaratra] teo. Satria moa manelingelina ny fotoam-pianaran'ny mpianatra taorian'ny fidiran'ny taom-pianarana vaovao dia nisy ireo nanao hetsika fanoherana ny fandaminana tsy mitombina loatra ity:
Misy ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo ao Beijing no tsy faly amin'ny fitondrana. Natombony tamin'ny alalan'ny fanentanana hitokona tsy hanao famerenana an-tserasera izany aloha. Nisy aza moa ny nandoro ampahibemaso ny akanjony fanaovany mitabe. Tsy nataon'ny fitondrana ho kivazivazy mihitsy izany fihetsiky ny mpianatra izany. Ankoatra ny nanakanana ny fitateram-baovao tsy hivoaka dia nalefa ny solontena hanaramaso sy hanafay ny mpianatra nanao izany fihetsika izany.
Koa satria moa voarara ny miady hevitra sy ny mitatitra ireny hetsi-panoherana ireny any amin'ny Tanibe ao Shina, dia any ampitan-dranomasina sy any Hong Kong no mandeha ny resaka.
Toy izao no hita ao amin'ny dinika ao amin'ny vavahadin-tserasera ho an'ny Shinoa Kanadiana:
Hoy i Waves : Mahantra loatra ny mpianatra. Tsy ara-tsaina intsony ny fanandevozana fa ara-batana ihany koa. Tsy isalasalana raha maro ny te-hianatra ampitandranomasina.
Hoy i 食量就是力量 : Tsy azoko hoe fa maninona raha somary kobokobonina kokoa ny fankalazana. Be loatra ny fandaniana sy ny fanelingelenana ny olo-tsotra. Nefa ho ana afomanga fotsiny izany rehetra izany, ho an'ny fahafinaretan'ny maso.
Ao amin'ny One-forum any Hong Kong:
Hoy i Qingqing: Raha mankatò tsy afa-mampiasa ny sainy ny baikon'ny mpitondra ny mpianatra, moa ve tena mpianatry ny Anjerimanontolo tokoa izany? Raha terena handray anjara amin'ity karazana kisangisangy ity ny mpianatra amin'ny Anjerimanontolo, moa tsy fanivaivana azy ireny ve izany ? Raha tsy manohitra, mitokona, na tsy mety miara-mientana na minia manao fahadisoana ry zareo dia tsy mendrika ny atao hoe mpianatry ny Anjerimanontolo.
Any amin'ny dinika hafa avy ao Hong Kong, Civilian Gunner:
Manontany i Louisli: Fa te-haka tahaka ny Koreana Tavaratra angaha isika?
Miteny i Seamoncheng: Mbola manjaka any amin'ny tanibe ny [fisehosehoana ivelany] hita maso… Adala ny mpitondra… mampandany vola sy hery olo-tsotra
Manebaka i Andy: Tena mahay mihitsy ny mpitondra fanjakana ka… ny karazana hetsika tahaka itony ange no tena fanararaotra hampidiram-bola be e!
[Saripika notsongoina tao amin'ny Apple Daily]